Vakavakwa-mukati/Telescopic Hood Vagadziri - China Yakavakwa-mukati/Telescopic Hood Factory & Suppliers
Yakabatanidzwa Cooker Hood 913
Integrated Hoods mune akasiyana dimension dhizaini kusangana nemhando kabati inoda. Kusveta simba kubva pasi (550m3/h) kusvika kumusoro (1000m3/h) nokuda kwechigadziko chekusarudza pakukura kwako kwekicheni. Zvose zvinokurumidza kubvisa mhepo uye kubvisa utsi kubva mukicheni uye neruzha rwakaderera hazvivhiringidzi hurukuro yekubika. vanhu.
Hood main panel inogona kunge iri simbi isina tsvina, mhando pendi yemavara, girazi kuti ienderane zvakanaka kicheni yakasiyana uye kabati maitiro Simba rakakwana mwenje we LED mune yakatenderera chimiro kana yakakosha LED tambo inosarudza sezvaunoda Kudzora nzira ine mechanical switch iri nyore kushanda, yemagetsi touch switch. yakawedzera kunaka uye izere yekubata switch ine yakawedzera smart basa senge timer, remote control uye WiFI base pane akasiyana mapaneru aunosarudza.
3/4 venting speeds deisgn yakanaka kune yakasiyana yekubikira inoda nenzira yakapfava yekuisa Inoshandiswa neanogezeswa aruminiyamu mafirita mafirita, 4 akaturikidzana aruminiyamu + 1layer SS kavha yekukwezva maziso emushandisi.
60cm Yakabatanidzwa Telescopic Cooker Hood ine 2-kumhanya Kubvisa 906/909
906: Telescopic Cooker Hood 60cm ine chiyero chekubvisa che380m³/h. 2 venting kumhanya kudzora nedombo switch. Chiedza che LED chinoramba chichishanda kwemaawa 100,000.
909: Telescopic Cooker Hood 60cm ine akawanda ekubvisa chiyero sarudza ine yakaderera ruzha kumanikidza mota 2 venting kumhanya kudzora nedombo switch. Chiedza che LED chinoramba chichishanda kwemaawa 300,000.
Maviri eVentilation Modes Optional: buda kunze nepombi yekudhonza yakaiswa kana kudzokorodza mukati nekabhoni mafirita.